जनताको दृष्टिमा प्रदेश सरकारको दुई वर्ष « Anumodan National Daily
जनताको दृष्टिमा प्रदेश सरकारको दुई वर्ष
प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १२:०२
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । नेपालमा संघीय लोकताँित्रक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था लागू भएपछिको पहिलो तथा संस्थापक प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा केकस्ता निर्णय ग¥यो ? के कस्ता विकास निर्माण योजना शुरु ग¥यो ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार ल्यायो ? र समग्रमा यस प्रदे्शका जनतामा कस्तो उत्साह र आशा जगायो ? अहिलेको मुख्य समिक्षा र बहसको विषय हुन् । यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले अल्पकालीन सहित तीन वटा बजेट ल्याइसकेको छ । नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ । एकतीस बढि ऐन ल्याएको छ । थुपै्र नियमावली, कार्यविधि ल्याएको छ । तर, अहिले पनि समस्या उत्तिकै छन् । जनताले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट प्रदेशमा रोजागारी सिर्जनाका लागि खासै काम गर्न सकेको जनताले अनुभव गर्न सककेका छैनन् । एउटै पनि गतिलो प्रदेश गौरवको आयोजना सञ्चालनमा आएको देखिदैन । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी दल मात्रै नभएर सत्तापक्षका अधिकांस सांसदहरु पनि सरकारका कामकारबाही प्रति तिखो आलोचकका रुपमा प्रस्तुत हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ ।
निश्चिय पनि समस्या र चुनौति छन् । कर्मचारी समायोजनको समस्या छ । कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले यथेष्ट मातहतका कार्यालय वा कार्यान्वयन इकाई स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच कतिपय मुलभूत विषयमा असहमतिको अवस्था देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्यको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कल्पना गरेको छ, तर तीनै तहका सरकार एक्लै परिचालित भएका छन् भन्ने सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधि ठूलो समय होइन, तर सधैंभरी नया संरचना तथा अभ्यासका नाममा जनतालाई टार्न सकिदैन भन्ने बोध हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपाली संघीयताको चुरो भनेको प्रदेश शासन हो भन्नेमा विमति रहदैन । त्यसैले प्रदेश सरकार सफल हुनुको विकल्प रहदैन । सुदूरपशिचमको अहिलेको सरकार संस्थापक समेत भएकोले यो सफल हुनु भनेको आगामी दिनमा संघीयताको यात्रा सहज हुनु नै हो ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षको यात्रा पुरा गरेको सन्दर्भमा अहिलेसम्मका कमीकमजोरीको गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरेर नै आगामी दिनका लागि जनतामा उत्साह जगाउने खालका ठोस कार्यक्रम अगाडी बढाउन सकिने छ भन्ने पनि बोध हुनु पर्दछ । प्रदेश सभा सदस्य तथा समाजका विविध पक्षहरूबाट सरकारका कामकारबाहीबारे हुने टिप्पणीलाई आफ्नो विरोधका रुपमा लिनु भन्दा पनि सुधारका लागि व्यक्त भएका अभिव्यक्ति हुन् भन्ने आत्मसात गरेर नै सरकारले विद्यमान कमीकमजोरी कम गर्ने तथा आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता बृद्धि गर्ने र प्रकारान्तरले जनतामा आशा र उत्साह बढाउन सक्ने छ । यसले नै आगामी दिनमा जनताको विश्वासमा पनि बृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नीति कार्यक्रम,बजेट र कार्यान्वयन
दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, विशिष्ट सीपयुक्त चिकित्सक तथा आइसियू, भेन्टिलेटर , अक्सिजन प्लान्ट, अत्यावश्यक औषधि आदिको व्यवस्थाका
कोभिड महामारीको जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका
धनगढीको हकमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने होडवाजी चलेको छ । यो स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो